i-IFP ikhalise izihlobo zezisulu zase-Phoenix ngemali - Ilanga News
Home Izindaba i-IFP ikhalise izihlobo zezisulu zase-Phoenix ngemali
i-IFP ikhalise izihlobo zezisulu zase-Phoenix ngemali
YENZE okungajwayelekile i-IFP izolo ngoLwesithathu ikhipha “imali yamakhandlela‚” ewu-R10 000 emndenini ngamunye kwewu-29 eyabhujelwa ngamalungu ayo ePhoenix, eThekwini, ngesikhathi kunezidubedube zokutatshwa kwe-mpahla ezitolo, ezinye zishiswa emasontweni amabili adlule.
Ithimba le-IFP ebelithunywe yi-Nkosi Mangosuthu Buthelezi uku-ba liyobhonga emswanini kule mindeni, lichithe usuku lonke li-hambisa le mali emindenini esezi-ndaweni ezahlukene zeTheku.
UNkk Duduzile Khwela owasho-nelwa yindodana yakhe, uMnu Xolani Cele (23), uthi ingane yakhe yalandela abangani bayo ababeye eCornubia, ngakhona ePhoenix ngosuku lwezibhelu kanti uzobuya esexhakwe ngabangani bakhe edu-buleke emqaleni.
“Befika lapha ekhaya, ngathi ngizama imoto yokumphuthumisa esibhedlela waphelela ezandleni zami imoto ingakafiki. Lesi sinxe-phezelo esisithola eNkosini Buthe-lezi neqembu layo, sizosiza kakhulu njengoba ngisele nezikweletu njengoba besingenalutho kokuthi afihlwe,” kusho yena.
UNkz Lungiswa Lukhuzo wase-Nigeria, eMawotana, owashonelwa ngumfowabo, uMnu Lindani Lukhuzo – owanyamalala mhla ka-12 kwephezulu waze watholakala emuva kwesonto emakhazeni asePhoenix, edutshulwe ngemuva inhlamvu yaphuma ngeso – uthi bamthola nje, basebezwile ngo-mngani wabo owayehamba nabo ukuthi ngesikhathi bephuma ukuyokwetha uphethiloli egalaji ePhoenix, bavinjwa yizakhamizi ezabezivale umgwaqo, zabadubula, waphuma (umngani) wangena esikhotheni. “Umfowethu nguye obebheke ikhaya, ezama nokwa-kha. Le mali esinxeshezelwa ngayo ngibona sengathi siyiphiwa nguye ngoba ubengafuni sisokole.
“Sibonga nasebuholini be-IFP ngokusikhalisa kangaka, kwande nalapho bethathe khona njengoba umfowethu sesizomfihla ngesizotha ngoMgqibelo,” kusho uNkz Lukhuzo.
IMeya yaseZululand, uMfu Thulasizwe Buthelezi – ebiyingxenye yethimba le-IFP – ithe le mali yamakhandlela bayihambise ngokuthunywa yiNkosi Buthelezi ukuba bayoduduza imindeni eha-njelwe yizihlobo zayo kulolu du-ngunyane.
“UMntwana uthi ukhala kanye nabo, usithume ukuba sizobaduduza.
“UMntwana waKwaPhindange-ne uchithe impilo yakhe yonke elwela isithunzi sabantu abampi-sholo ukuthi bathuthuke, bahlale ngokunethezeka. Namanje usami kuleyo migomo ethi sonke eNingizimu Afrika asihlale ngokuzwana.
“Ucele abantu ukuba balinde uhlelo olusenkantolo (mayelana nokubulawa kwabantu ePhoenix) luphothulwe, esithembayo ukuthi ubulungiswa buzovela ngemuva kwalokho.
“Abatholwa benecala, kumele bathole isijezo esibafanele,” kusho uMfu Buthelezi obehambisana ne-Meya yaseNkandla, uMnu Thami Ntuli, uMnu Mfanje Mbangwa, uMnu Narend Singh ongumgcinimafa we-IFP, uMnu Joshua Mazi-buko namakhansela abekhishwe wuMasipala weTheku ukubaphe-lezela.
Previous articleKuphenduke amatafula ngeCarling Cup
Next articleBabhekene nengwadla abahola eyesibonelelo